मानिस कमजोरीहरूका विच पनि महान बन्न सक्छ - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: २९ कार्तिक २०७२, आईतवार May 5, 2016
‘जो सबै भन्दा जरूरी छ , शुरुवात त्यसैबाट गर । त्यसपछि मात्र जे सम्भव छ त्यो गर । यति नै गर्यौ भने पनि अचानक तिमीले आफुलाई असम्भव कार्यसिद्दी गरिरहेको पाउंनेछौ । ” -सन्त फ्रान्सिस
विश्व ओलम्पिक खेलमा आश्चर्यजनक रुपमा धेरै पदक हासिल गरेका भारतका प्रसिद्द बक्सिङ्ग खेलाडि मोहम्मद अलि खान लाई पत्रकारहरूले सोधेका थिए ‘आजको दिन तिम्रो लागि भाग्यशाली रहेछ है”। यसमा उनको जवाफ थियो ” -‘तिमीले आजको दिनको सफलतामा मलाई जोडेर हेर्यौ , तर मैले यो दिनका लागि रात दिन नभनि विताएको विगतको १८०० घण्टाको कठिन तयारी पनि यो सफलतामा जोडेको भए तिमीले यसको उत्तर पाउंथ्यौ। ” उनको यो उत्तरमा निरन्तरता, प्राथमिकता र समय सीमा भित्रैमा लक्ष्य तर्फ पूर्ण समर्पण नै सफलता हो भन्ने दार्शनिक भनाइ लुकेको थियो । स्वामि विवेकानन्द ले एक पटक आफ्ना शिष्यलाई भनेका थिए ‘जे काम गर्छौ त्यसका लागि तिमीमा भएको पूर्ण सामर्थ्य लगाउ त्यसैले तिमीलाई कार्य सिद्दी तर्फ पुर्याउने छ । जब हामि काममा असफल हुन्छौं तब यी त भन्ने भनाइ त हुन्न भन्दै आफु वरिपरिको परिवेश वा ब्यक्तिलाई दोष थुपार्छौं । परीक्ष्या विग्रियो भने ‘प्रश्न जटिल थिए वा समय कम हो भन्छौं । जबकि त्यहि प्रशन हल गरेर थुप्रैले उच्च मार्क ल्याउंछन्। ‘ लडियो कतै भने बाटो असजिलो भन्छौ। जबकि त्यहि बाटो सजिलै हिंडेर धेरैले यात्रा पुरा गरेका हुन्छन्। “हामि हार्यौं भने त्यो अर्काको जितमा छलबाजी लुकेको भन्छौं ‘। य सरी हेर्दा हामीलाई किन दु:ख हुन्छ भने हामि आफुले गर्न नसकेकोमा भन्दा पनि अरूले केही गर्न सकेकोमा बढी पिडा बोध गर्छौं ।
यस्तै कोहि सफल भई हाल्यो वा कुनै ब्यवसायिक सफलता हासिल गर्‍यो भने हामि उसको जीवनका अन्य सन्तुलन हेर्दैनौ* र धनको कमाइमा नै उसले प्रगति गरेको दर्जा दिन्छौं । उसले गोल हान्दा कति छल गर्‍यो , कतिलाई दु:खायो वा दुखाएको छैन भन्दा पनि उसले गोल हानेको मात्र हामी गनेर बस्छौं । एक दार्शनिकले भनेका छन् कि ‘यदि तिमी साच्चै कुनै महान पुरुषको चरित्र जांच्न चाहन्छौं भने उसका ठुला कार्य बाट नजांच । एक जना मुर्ख पनि विषेश अवसरमा बहादुर बन्छ । मानिस अत्यन्त साधारण कार्यर्कओ जांच गर र वास्तवमा त्यो नै यस्तो कुरा हो जसबाट एक महान पुरुषको वास्तविक चरित्रको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ । ”
ब्रम्हो पनिषदको १०८ औं मन्त्र भन्छ ‘आनन्दं ब्रम्ह” । अर्थात सधैं साथमा रहने नै ब्रम्ह हो र अनित्य आनन्द नै वास्तविक आनन्द हो । यस्तै हामीले वर्तमानमा भोगिरहेको पीडा , दु:ख हामीले नै गरेका कर्मका फल हुन्। यदि यसलाई बुझ्न सक्यौं भने हामीले नै यसलाई नष्ट गर्न सकिन्छ । सिर्जना गर्न सकिने कुरालाई अन्त्य गर्न पनि सकिन्छ । त्यसैले उठ ,उत्तरदायित्व बोध गर । विग्रेको काम हेरेर दु:ख मान्ने हैन सुन्दर भविस्य लाई हेर । द्वारीका मा महल बनए पछि कृष्ण भगवानले आफ्नो कालिगढ लाई भन्नु भयो कि ‘द्वारीका तर्फ देखिने गरि कुनै झ्याल नराख्नु, किनकि त्यो विगत भईसक्यो अब अगाडिको बाटो हेर्नु पर्छ ‘।जबकि द्वारीका कृष्ण जि का लागि अति प्रिय स्थान थियो । को अर्थ आज सम्म ढिला भएर केही हुंदैन अब ढिला नगर । मदन पुरस्कार विजेता ‘खुसी’ पुस्तकमा विजय कुमारले लेखेका छन्’ हुनत मानिसले सत्यको दर्शन कहिल्यै नगरनु भन्दा अबेरैं गरे बेस । मानिस आफ्ना कमजोरिहरूका साथ पनि महान हुन सक्छ । कसैले जित पचाउन सक्दैन कसैले हार पचाउन सक्दैन। कसैले दुबै पचाउन सक्दैन । आफ्नो अहङ्कारको तृप्‍ति गर्नासाथ खुशी रहने र हार्ना साथ दु:ख मनाउनु भन्दा हरेक दु:खलाई पनि बरदान सम्झ । ‘स्वामि विवेकानन्द ‘ पुस्तकमा उनको भनाइ लेखिएको छ कि ” म सारा दु:खलाई नराम्रा काम को भुक्तानि गरेको हो भन्दै सुखि हुन्छु । ‘
यसैले प्रख्यात दर्शनिक अब्राहम भनेकाछन्’ आजै गर्न सकिने भोलिको कामलाई भोलि भनेर नसांच । ”
कोर्म्याक भन्छन् -“सबै भोलिको लागि तयार हुन्छन् तर भोलिको दिन सबैका लागि तयार नभएको कुरा उनिहरू थाहै पाउंदैन्। ”
अझै केही विग्रेको छैन ,आजै बाट न शा मुक्ति को प्रण गरौं । तपाईंले भोली देखि हैन अहिले नै साथी , भाई , आफन्त मात्र हैन ,आँफैंलाई चकित पार्न सक्नु हुनेछ । आंखा चिम्लेर ३ पटक भन्नुहोस् ‘म सक्छु’ अवश्य सक्छु ‘ अवश्य सक्छु ‘।
एक जना सफल इन्जीनियरलाई सोधिएको थियो , तपाईंको सफलताको रहस्य के हो ! उत्तरको अपेक्ष्या थियो ‘ मिहिनेत , लगनशिलता , निरन्तरता आदि -आदि तर उनको उत्त्त र थियो ,मेरो विगतका गल्ति ‘! उनले थपे ‘हो मैले विगतमा धेरै गल्ति गरें , त्यहि गल्ति बाट सिकेर आज म सफल छु , यो बाहेक मेरो रहस्य केहि छैन ‘। गल्ति , हार , असफलता जीवनको अन्त्य अवश्य होइन। यो फेरी उठ्ने एउटा सबल आधार हो । -भीमसेन सापकोटा
काठमाडौं । हामी हाम्रो जीवनमा के चाहन्छौं, कस्तो जीवन चाहन्छौं ? यसको जवाफ पनि हामीसँग सजिलो छ– सुख, शान्ति, […]
काठमाडौं । काठमाडौं,माघ १९ -माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने ‘श्रीपञ्चमी’ पर्व आज विद्याकी अधिष्ठात्री देवी […]
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अयोध्यामा बाबरी मस्जिद रहेको स्थानमा राम मन्दिर बनाउने पक्षमा […]
शाकाहारी भोजन उत्तम,के-के छन् फाईदा ?
दैनिक जीवनमा भोजन अत्याश्यक छ । सन्तुलित भोजनले हाम्रो शरीरलाई तन्दुरुस्त बनाउँछ । हरेक मानिस भोजनमा फरक–फरक […]
काठमाडौं । मौसममा आएको परिवर्तनसँगै केही दिन यता राजधानी लगायत देशभर चिसो बढेको छ । चिसो बढेपछि देखिने […]
कठोर व्रत ‘श्रीस्वस्थानी व्रत’ यस्तो छ व्रर्तालुले पालना गर्नुपर्ने नियम
काठमाडौं । माधवनारायण स्वस्थानी व्रतलाई कठोर व्रतमध्येकै एक मानिन्छ । स्वस्थानी पूजा र व्रत सांस्कृतिक र […]